UKanté ushaya i-France | Scrolla Izindaba
UKanté ushaya i-France
Umdlali wasesiswini uN’Golo Kanté ushaye i-France emqhudelwaneni owandulela owamanqamu we-Nations League ngeSonto, eshaya ompetha i-Portugal ngegoli elilodwa eqandeni.
UKanté, onabazali abavela e-Mali, udlalela iqembu le-Chelsea kwibhola likanobhutshuzwayo.
UKanté ushaye igoli lakhe lesibili kuphela le-France ngomzuzu wama-54 ukubashiya bephezulu kwiligi yabo ngokuhola okungenakuphikiswa.
I-France ilahle okungenani amathuba amathathu ngaphambi kokuthi uKanté athole igoli. ULes Bleus – njengoba iqembu laseFrance laziwa – ube esenqabela i-Portugal igoli lokulinganisa.